जस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ ! – Sanjal Nepal
Homeसमाचारजस्तोसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढौ ! नपढे तपाईलाई प’छुतो हुनेछ !
November 4, 2020 admin समाचार 10651
म सु’तेको थिए , मेरी श्रीमतिले मेरो टाउको मालिस गरीरहेकी थिइन ,म बिस्तारै – बिस्तारै निदाए जागेपछी उनले निधारमा भिक्स लगाइदिइन मेरो आँखा खुल्नासाथ उनले सोधिन केही आराम मिल्यो कि नाइ मैले मिल्यो भनेर टाउको हल्लाए फेरि उनले सोधिन कि , खाना खानुहुन्छ मलाई भोक लागेको थियो मैले भने खान्छु ”उनले फटाफट रोटी , सब्जी , दाल ,अचार , सलाद तुरुन्तै मेरो सामनेमा पस्किइन र आधा पल्टी – पल्टी मेरो मुखमा गाँस हाल्दै खुवाइन , मैले चु’पचाप खाना खाएर फेरि ढ’ल्किए श्रीमतिले मलाई आफ्नै हातले खाना खुवाएर उनी खुशी महसुस गर्दै किचनको काममा गइन म चु’पचाप सु’तीरहे र सोच्न थाले कि पुरुष पनि कस्तो हुन्छ ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
सोच्न थाले ,जुनदिन मेरी पत्नीलाई ज्व’रो आएको थियो , त्यो मध्यान्नमा जब उनलाई भो’क लागेको होला र ओछ्यानबाट उठ्न नसकेकि होली, त्यतिखेर उनले पनि सोचेकी होलिन कि कास मेरो पति आज मसित हुन्थ्यो भने ? मैले जेसुकै सोचु तर मलाई लाग्छ कि हरेक पुरुषलाई एक जन्ममा महिला बनेर यी कुराहरु सम्झिने को’सिस गर्नुपर्दछ कि साच्चै नै कति मु’श्किल हुन्छ , महिलालाई महिला बन्नु , आमा हुनु , पत्नी हुनु र बहिनी हुनु |****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
January 5, 2021 admin समाचार 2811
December 22, 2020 admin समाचार 3440
शौचालयमा थुनिएकी महिलाले १७ वर्ष अगाडी नरेश कुमार नाम गरेका पुरुषसँग विवाह गरेकी थिइन् । उनको १५ वर्षीय एक छोरी र ११, १३ वर्षका दुई छोरा छन् । डेढ वर्ष अघि मात्रै उनका श्रीमानले शाैचालयमा
दुई दिन भित्र त’पाईं’को काम बन्नेछ ,बि’ल्कुलै बे’वास्ता न’गरि दे’ख्ने बित्तिकै ॐ लेखी से’यर ग’र्नुहोला।
November 1, 2020 admin समाचार 6232
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् । सबैलाई संस्कृतको ज्ञान